Iibso Brightener & Maqaarka Maqaarka Sepiwhite Powder MSH - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Sepiwhite Powder MSH
Nambarka Tusaalaha: 41213
Function: Brightener, Wakiilka Caddaynta maqaarka ayaa caddeeya, Iska yaree dhibcaha
Fasalka: Fasalka Qurxinta
Budada Sepiwhite MSH waa lipo amino acid waxayna ugu horrayn tahay alfa-MSH antagonist iyo tyrosinase inhibitor. Alpha-MSH waa xakameeyaha muhiimka ah ee melanotropin (midabaynta maqaarka) halka tyrosinase uu yahay enzme ka mas'uul ah wax soo saarka melanin.
Ka -hortagga/yareynta wax -qabadyadan ayaa markaa keenta dhalaalka maqaarka/dhalaalka iyo hagaajinta guud ee midabka maqaarka.
Ku dhiirrigeli midabka maqaarka inuu noqdo mid aad u sii dhalaalaya
Dhiirrigelinta yaraynta tirada iyo midabka dhibcaha waayeelka
Xaqiiji inaad waxtar u leedahay dhammaan noocyada maqaarka iyo jinsiyadaha
Kor u qaad xitaa midabka maqaarka
Waxaa la soo wariyay in iftiinka iyo dhalaalka maqaarku aad u kordhay.
Merci Aad baad u mahadsan tahay